Wax ka baro Taariikhda waayaha dalka Spain. – Balcad.com Teyteyleey
Dalka Spain waxaa uu ka mid yahay dalalka ku yaala qaaradda Yurub gaar ahaan koofur galbeed waxana loo yaqaanaa jamhuuriyadda Federalka ah ee Spain.
Dalkaan oo loo aqoonsanyahay dalka 4,aad ee Yurub oo dhan ugu weyn waxaa uu xaduud dhuleed la leeyahay dalal ay ka mid yihiin Faransiiska, Portaqiiska iyo dalka Marocco waana dalka kaliya ee Yurub ku yaala ee had qaaradda Africa xaduud la leh.
Dalka Spain waxaa sidoo kale waxaa ku yaala jaziirado badan oo loo dalxiis tago.
Tirada dadka Spain u dhashay waxaa lagu qiyaasaa 47 million oo qof waana taas tan keentay in loo aqoonsado dalka 5,aad ee Yurub ugu dadka badan.
Caasimada dalkaan aanu ka hadlayno waxaa la yiraahdaa Madrid luuqada dalka looga hadlana waa Af Spanish gaadiidkuna waxay isku dhaafaan dhanka midig waxaana laga adeegsadaa lacagta Yurub ee Yuuroga.
Dalkaan Spain oo taariikhyahanadu aaminsanyihiin in waagii hore la oran iray Hispania waxaa la aaminsanyahay in la degay 35 kun oo sano ka hor.
Taariikhyahanada qaar waxay aaminsanyihiin dawladinimada Spain markii ugu horeysay la aas aasay sanadku markuu ahaa 1479.
Dalka Spain oo ay maamulo kala duwan soo mareen nidaamka dimoqraadiyadda ee hadda ka jira waxaa la aas aasay 1978.
Marka taariikhda dib loogu laabto dalkaan waxaa uu ka mid ahaa wadamadii Islamku gaaray qarnigii 8,aad
Dagaal sokeeye ee Spain ka dhacay intii u dhaxaysay 1936 illaa iyo 1939 oo ay ku naf waayeen qiyaastii 500 oo kun oo qof ugu dambeyn talada dalka waxay gacanta u gashay sargaalkii la oran jiray Faransisco Franco.
Spain oo ka mid ah dawladihii dunnidaan dalal ku yaala soo gumaysatay dalal badan ayaa bartay oo hadda looga hadlaa Afka Spanishka waxaana luuqada Spain tahay tan labaad ee adduunka dadka ugu badan ku hadlaan.
Qiyaastii 500 million oo qof oo dunnidaan ku nool ayaa ku hadla Afka Spanishka.
Wadankaan aanu ka hadlayno ee Spain hadda waxaa uu xubin ka yahay Q,M ururka Midawga Yurub, ururka gaashaanbuurta NATO ururka ganacsiga Adduunka ee WTO iyo ururo kale.
Dawladda hadda jirta oo lasoo doorto waxaa sidoo kale taladu ka go’daa boqorka dalkaasi hase ahaatee waxaa jira maamul goboleedyo iskood isku maamula waxaana ka mid ah maamulka gobolka Catalonia oo hadda doonaya inay noqdaan dal gooni ah oo Spain ka madax banaan.
Xagga dhaqaalaha haddii aanu eegno dalka Spain waa dalka 14,aad ee dunnida ugu dhaqaalaha badan.
Qiimeyn la sameeyay sanadkii hore qiyaastii 7% dadka wadankaasi ayaa shaqo la’aan ah marka loo eego bulshada dalkaasi.
Toban sanno ka horna dadka shaqo la’aanta ah waxay gaarayeen 20% sida lagu baahiyay xog uu shaaciyay bangiga Adduunka.
Dalkaan waxaa uu sidoo kale ka mid yahay dalalka marti galiya dadka soo galootiga ah waxaana lagu qiyaasaa dadka magangalyada u jooga dalkaasi in ka badan 5 million oo qof.
Dawlada hadda jirta waxbarashadu waa lacag la’aan waxaana qasab ah in iskuul la geeyo oo wax la baro caruurta da’doodu u dhaxayso 6 illaa 16 jir .
Xagga diimahana dawlada dalkaasi ka jirta waxay aaminsan tahay in dadka ugu badan ay masiixiyiin yihiin.
Islamka oo dalkaasi gaaray qarnigii 8,aad muslimiintu waxay bulshadda dalkasi ka yihiin in ka badan 4%.
Dhaqanka marka loo eego ragga iyo dumarkuba waxay xirtaan dhar dhaadheer timahana raggu waa daystaan.
Raashinka loogu jecelyahay waa maraq laga sameeyay hilbaha xoolaha oo dalkaasi looga yaqaan Payella.
Xagga cayaaraha haddii aan eegnana kubadda cagta aad ayaa looga xiiseeyaa horyaalka Spain ee Laligaha aad ayaadunnida looga xiiseeyaa.
Kooxo qaab cayaareedkooda aad loo jecelyahay oo ay ka mid yihiin Real Madrid Barcelona iyo kooxo kale ayaa ka jira dalkaasi.
Xulka qaranka dalkaasi Sadex mar ayuu ku guulaystay koobka horyaalka Yurub sanadihii 1964, 2008 iyo 2012 iyo hal mar oo ay qaadeen koob adduun waxaana uu ahaa sanadkii 2010..
Cayaaro kale oo ay ka mid yihiin Feerka teeniska, baasketka iyo cayaaro kale ayaa dalkaasi laga xiiseeyaa, waxaase jira cayaar dhaqameed dalkaasi laga xiiseeyo waana cayaarta ah dibbida lala dagaalamo.
Cayaaraha noocaan oo kale ah waxaa sharci ah inuu ka qeyb galo dibbi ugu yaraan 6 sanno jir ah.
Sanad walbana qiyaastii malaayiin dibbi ayaa cayaarta noocaan oo kale ah ku geeriyooda.
W/D:Burhaan Diini Faarax
The post Wax ka baro Taariikhda waayaha dalka Spain. appeared first on Ilwareed Online.